Boqolaal Qoys oo Dib Ugusoo laabanaya Guryahooda Degmada Wabxo Kadib Bixitaankii Ciidanka Xabashida Itoobiya Warbixin.
Wednesday December 17, 2014 - 12:45:11 in Wararka by Super Admin
Xaala deganaan ayaa lagasoo sheegayaa degmada Wabxo ee gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya maalmo kadib markii degmadaasi ay isaga baxeen ciidamada gumeysiga Itoobiya.
Sawir Hore Fantasyo Degmada Wabxo Ka Dhacay
Boqolaal qoys oo kamid ah dadka deegaanka ayaa bilaabay in ay dib ugusoo laabtaan guryahooda kadib bilo ay barakac ku ahaayeen tuulooyinka iyo baadiyaha Wabxo hoos yimaad.
Ol ole nadaafadeed ayaa gudaha degmada Wabxo ka bilaawday gaadiid badeecado ganacsi sida ayaa saacadihii lasoo dhaafay kusii qulqulaya magaalada Wabxo.
Mid kamida waxgaradka Wabxo ayaa warbaahinta u sheegay in noloshii magaalada kajirtay si tartiib tariib ah dib ugusoo laabanayso isagoona raja ka muujiyay in xaaladda degmadu kusoo laaban doonto sidii ay ahaan jirtay ka hor intii aysan qabsadan ciidamada Itoobiya.
Maamulkii islaamiga ee sanadadii lasoo dhaafay Wabxo maamulayay ayaa isna dib ushaqa bilaabay,mas’uuliyiin katirsan wilaayada islaamiga Galguduud ayaa degmada gaaray iyadoona wilaayadu gacan ka geysatay sidii dadka baadiyaha fog fog ka imaanaya ay guryahooda dib ugusoo laaban lahaayeen.
Waa degmadii ugu horreysay oo Galguduud katirsan ee ciidamada Xabashida Itoobiya laga xureeyo,ciidamada muslimiinta ayaa Itoobiyaanka ku go’doomiyay dhammaan degmooyinka ay qabsadeen Ceelbuur iyo Ceelgaras iyadoona qabaa’illada Maxamuud Hiraab iyo Murusade ay iyana cadaadis saareen gumeystaha kadib markii ay isaga barakaceen magaalooyinka ixtilaalka galay.